कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा २९ जनाको मृत्यु, कुन जिल्लामा कति ? — Sanchar Kendra
काठमाडौं । ललितपुरको स्टार अस्पतालमा मृत्यु भएका एकजना पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । अस्पतालका कोरोना व्यवस्थापन समितिका संयोजक डाक्टर अनिल पोखरेलले अस्पतालमा मृत्यु भएका एकजना ३० वर्षका पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिएका हुन् ।
अस्पतालले उनमा कोरोनाको आशंका गर्दै कोरोना संक्रमतिलाई छुट्याइएको आइसियुमा भर्ना गरेको थियो । उनको शनिबार राति नै स्वाब संकलन गरी पाटन अस्पताल पठाइएको र सोही दिन राति नै बिरामीको मृत्यु भएको डा. पोखरेलले बताए । उनको आइतबार राति ११ बजे रिपोर्ट पोजेटिभ आएको डा पोखरेलले बताए ।